Ataovy azo antoka ny fiarovana ny vokatra sy ny mpiasa - China Kingswel milina
Ataovy azo antoka ny fiarovana ny vokatra sy ny mpiasa
Koa satria ny vaovao Coronavirus vaika ao Shina, hatramin'ny governemanta sampan-draharaha, any amin'ny olon-tsotra, dia Kingswel milina ao amin'ny faritra rehetra mandeha eo amin'ny fiainana, ambaratonga rehetra ny vondrona dia mavitrika manao zavatra mba hanao asa tsara ny areti-mifindra ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny asa.
Na ny orinasa dia tsy ao amin'ny faritra fototra - Wuhan, saingy mbola tsy maka izany zavatra kely, ny voalohany hanao zavatra. Tamin'ny 27 Janoary, dia nanangana maika vondrona mpitarika ny fisorohana sy ny valin-maika ekipa, ary avy eo ny orinasa valan'aretina asa fisorohana haingana sy amin'ny fomba mahomby lasa miasa. Tsy avy hatrany dia namoaka fepetra ny valan'aretina eo amin'ny tranonkala ofisialy, ny vondrona QQ, WeChat vondrona, WeChat Official kaonty, ary ny orinasa sehatra politika vaovao. Tamin'ny fotoana voalohany namoaka ny fisorohana ny tantara Coronavirus pnemonia sy ny resumption ny asa-mifandray fahalalana, miarahaba ny rehetra ny toe-batana tsirairay sy ny valan'aretina amin'ny taninao. Tao anatin'ny iray andro, dia vita ny antontan'isa ny mpiasa izay nandao ny tanàna niaviany nandritra ny Lohataona Festival fialan-tsasatra.
Hatreto, tsy ny avy-of-birao homarinana avy amin'ny teny manokana nahita tranga iray ny marary miaraka amin'ny tazo sy ny mikohaka. Avy eo, dia manaraka ihany koa ny fepetra hentitra ny governemanta sy ny sampan-draharaha valan'aretina fisorohana ekipa mba hamerina hijery ny fiverenan'ny mpiasa mba hahazoana antoka fa ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ao an-toerana.
Ny orinasa nividy maro ny fitsaboana saron-tava, hamonoana otrikaretina, infrared ambaratonga thermometers, sns, ary efa nanomboka ny voalohany batch ny fanaraha-maso sy ny mpiasan'ny orinasa naka fanahy asa, raha disinfected-manodidina rehetra indroa isan'andro eo amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana sy ny fototra biraon'ny departemanta .
Na dia tsy misy soritr'aretin'ny nipoahan'ny hita ao amin'ny orinasa, dia mbola manodidina rehetra-ny fisorohana sy ny fanaraha-maso, mba hiantohana ny fiarovana ny vokatra, mba hiantohana ny fiarovana ny mpiasa.
Araka ny OMS ny Filazam-baovao, ny entana avy any Shina dia tsy mitondra ny otrik'aretina. Io aretina dia tsy misy fiantraikany amin'ny fanondranana ny entana miampita sisintany, mba mety ho tena tapaka ho handray ny vokatra tsara indrindra avy any Shina, ary dia hanohy hanome anao ny tsara indrindra-varotra toetra taorian'ny fanompoana.
Farany, tiako ny misaotra ny mpanjifa any ivelany sy ny namany izay mikarakara momba antsika mandrakariva. Rehefa vita ny valan'aretina, antitra maro mpanjifa fifandraisana antsika voalohany, anontanio ange sy ny fikarakarana momba ny toe-javatra amin'izao fotoana izao. Eto, ny tehina rehetra Kingswel milina dia te-haneho ny tso-po indrindra noho ianao!
Post fotoana: Feb-28-2020